July 15, 2016 – Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya mudane, Xasan Shekh Maxamuud ayaa ka qaybqaatsy munaasabad lagu qabatay Dugsiga Ciidamada Booliska ee Janaral kaahiye, kadib markii halkaasi tabar loogu soo xirayay saraakiil ka tirsan ciidanka booliska soomaaliyeed, kuwaas oo uu mudo tabar ugu socday Dugsiga tababarada ciidamada booliska ee janaraal kaahiye.
Wasiirka Amniga Gudaha ee dowladda Federaalka Soomaaliya oo isagana ka qayb galay munaasabadda ayaa tilmaamey in dedaal xoog leh uu sameeyey taliska ciidanka oo kaashanaya wasaaradda Amniga laguna guuleystay in si dhab ah loo fuliyo go’aankii madaxweynaha ee dib u habeynta ciidammada Booliska Soomaaliyeed.
Madaxweynaha JFS Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku ammaanay taliyaha ciidammada Booliska dedaalka uu sameeyey, waxa uuna u hambalyeeyey saraakiisha cusub ee noqtay Jaamiciyiintii ugu horreysay ee ka soo baxay dugsiga Jeneraalk Kaahiye.
Madaxweynaha ayaa kula dardaarmay saraakiisha Akedeemiyadda Jeneraal Kaahiye ka qalin-jabisay in sida kaliya ah ay ku guuleysan karaan in ay tahay marka ay saaxiib dhab ah ka dhigtaan shacabka Soomaaliyeed.
Ugu dambeyn Madaxweynaha ayaa gacantiisa ugu xiray darajo laba Xiddig ah saraakiisha Qalin-jabisay, isagoo sidoo kale dalacsiiyey saraakiil ka tirsan Ciidammada Booliska Soomaaliyeed.
July 15, 2016 tuugahaladilo2015